Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Ezona ndawo zidumileyo zegalufa / iiholide eMelika
I-US ibisoloko ndiyithanda igalufa. Nangona umdlalo uvela eBritane, i-US ine-45% yezixhobo zegalufa zehlabathi kwaye ibamba uninzi lweentshatsheli eziphambili.
Iyothusa 36.9 million Abantu baseMelika badlale igalufa ngo-2020 kuphela.
Akumangalisi ukuba eli lizwe likhaya kwiintsomi ezininzi zegalufa.
Ngokusekwe kuphando olwenziwe yiwebhusayithi yokuthelekisa iindiza Fumana indiza enexabiso eliphantsi, Siye saqulunqa uluhlu lweendawo ezidumileyo zegalufa kunye neeholide eMelika.
Esi sikhokelo siza kukunika ukuqonda kwezinye zeeklabhu zegalufa ezikhethekileyo kwihlabathi. Ukusuka kwii-limousine escorts ukuya kwi-250,000 yeefizi zobulungu, kuninzi kakhulu kwezi klabhu ngaphandle komdlalo wegalufa.
Ezona ndawo zidumileyo zegalufa kunye neeholide eMelika
Uninzi lweeklasi ezaziwa kakhulu zegalufa kunye neeholide eMelika zenziwa ngaphezulu kweminyaka engama-50 eyadlulayo. I-Hollywood elite kunye nezopolitiko ezinamandla ziye zathambisa amagxa kuzo zombini nangaphandle kwezifundo, nangona ngubani owaziyo ukuba bathetha ngantoni ngexesha lomdlalo!
Ezinye zeeklasi zegalufa ezithandwa kakhulu e-US zibandakanya iRiviera Country Club eCarlifonia, iShadow Creek eNevada kunye nePine Valley Golf Club eNew Jersey.
Qhubeka ufunda ukuze ufumane ukuba zeziphi iikhosi zegalufa kunye neeholide ezenze uluhlu 'oludumileyo' eMelika.
I-Whistling Straits yenye yezi zifundo zimbini zinxulunyaniswa neAmerican Club. Ihamba ngeemayile ezimbini zeLake Michigan elunxwemeni kwisitayile sekhonkco engama-36. Ikhosi uqobo lwayo yi-6,757m kwaye yayilwa ngabantu abatshatileyo, uPete noAlice Dye.
Le khosi ngumsebenzi wobugcisa wokudlala. Imiselwe ukubamba indebe ye-Ryder yama-43 ngo-2021 kunye novavanyo lweentshatsheli kwimida yabo. Ngaphambili ibisoloko isingathe ezininzi I-PGA Championships kunye ne-US Senior Open.
Ungazinyanga ngokwakho kwiphakheji yegalufa ukuze ube nakho ngokupheleleyo ikhosi. Iphakheji eyaziwayo kukuDayi, okubandakanya ukuhlala ubusuku obuthathu, imidlalo emine engama-18 kunye nemizuzu engama-30 yesifundo segalufa.
Ngaphandle kokusekwa eWisconsin, le khosi ikhumbuza indawo yokuhlala yasefama yaseIreland. Zininzi iivenkile zokutyela onokuzitya emva kosuku oluxakekileyo lwegalufa. Imenyu yaseBritane enefuthe lokufaka izitya zokutyikitya ezifana nokuncamathela kwetofi pudding kunye nomqolo wemvana.
Iklabhu yeGalufa yeSizwe ye-Agasti
Isekwe eAugusta, Georgia, le kilabhu yavulwa nge-1930s. Le yenye yeeklabhu ezikhethekileyo eMelika kuba ivuleleke kuphela kumalungu nakubakhenkethi kuphela.
Uninzi lwabantu luya kuyazi iklabhu yaseAugusta emva kokuyibukela kumabonakude wabo ngo-Epreli ngamnye. I-Master's Tournament ibibanjelwe ekhosini ukusukela oko yadalwa nguBobby Jones ngo-1934.
Le khosi ine-18-hole, ngo-72. Yayilungiselelwe yintshatsheli engahlawulwayo, uBobby Jones kunye noyilo, uAlister Mackenzie. Le duo yangqineka inamandla okumatanisa kwaye umphumo ungumzekelo ogqibeleleyo wezinto ezicocekileyo nezivulekileyo zekhosi yegalufa laseMelika.
Ubude bekhosi zizonke ziiyadi ezingama-7,475. Imingxunya nganye ibizwa ngegama lezityalo kuba indawo yayifudula iyindawo yokugcina izityalo. Umngxuma wokuqala ubizwa ngokuba yi-Tea Olive, kunye namanye amagama kubandakanya i-Crab Apple (1) kunye neCarolina Cherry (4).
Kiawah Isiqithi seGalufa
I-Kiawah Island Golf Resort yabekwa kwiikhosi ezili-100 eziphezulu kwihlabathi (i-Ocean Course) ngo-2020. Ikwaququzelele ubuNtshatsheli be-PGA ngo-2021, nekukuphela kobuntshatsheli abane obubanjelwe kuphela abadlali begalufa.
Kukho iikhosi ezintlanu kwiSiqithi saseKiawah: Ikhosi ye-Ocean, i-Osprey Point, i-Oak Point, iTurtle Point kunye neCougar Point. Ikhosi nganye iyi-18-hole, 72 par. Ngemingxunya elishumi kufutshane neAtlantic kunye nezinye ezisibhozo ngokuthe ngqo, iKhosi yeLwandle ineyona mingxunya yolwandle eMantla eIkhweyitha. Oku kwenza ikhosi enomoya ngakumbi eyongeza kumceli mngeni wale khosi.
Indawo yokuhlala yegalufa yaseMzantsi Caroline ineendawo zokutyela ezili-14, imivalo kunye neefestile, kubandakanya iGumbi lase-Ocean kunye neJasmine Porch. Unokuchitha ixesha lokuphumla kwi-spa yeenkwenkwezi ezintlanu kunye ne-salon kwaye uhlale kwi-Sanctuary Hotel, kwii-villas okanye kwindawo yokuhlala yabucala.
IQela leLizwe laseRiviera
Ifunyenwe kwiPacific Palisades, eCalifornia, iklabhu yelizwe iRiviera ivulekile phantse ikhulu leminyaka. Ikhosi ibamba rhoqo iLos Angeles evulekileyo kwaye ilungiselela ukusingatha iminyhadala yegalufa kwiiOlimpiki zowe-2028.
Ifana nezinye iiklabhu ezininzi kolu luhlu, i-Riviera Country Club yeyamalungu kuphela. Amalungu angaphambili abandakanya uWalt Disney kunye noDean Martin. Akumangalisi ukuba abantu abakhethekileyo babe ngabo kuphela abanokufikelela kule klabhu ikhethekileyo- ubulungu bunamahemuhemu okubiza iindleko $250,000!
Ikhosi enemingxunya engama-18 ineempawu ezizodwa ezinje ngengca yaseKukuya, nengca ebalulekileyo evela eAfrika. Iklabhu ikwabandakanya iklabhu yentenetya ukuba unomdla wokuya komnye umdlalo. Ungahlala kwenye yee-suites ezingama-24 ezimiselweyo ukuba unethamsanqa lokumenyelwa ukuba udlale kwiklabhu lilungu.
IPine Valley Golf Club
IPine Valley Golf Club yavulwa ngo-1919 kuMazantsi eNew Jersey. Sele isaziwa njengeyona khosi inzima emhlabeni, kunye neyona ikhethekileyo.
Ngaphandle kokuba umenyiwe ukuba utyelele le khosi lilungu, akunakulindeleka ukuba udlale le khosi njengelungu. Kukho amarhe okuba malunga namalungu angama-930 kwihlabathi liphela, nangona uluhlu luyimfihlo ekhuselweyo. Ngokungafaniyo nezinye iiklabhu ezibonelela ngenkqubo yokwenza isicelo selungu, ibhodi yabalawuli kwiPine Valley Golf Club isondela kumalungu amatsha anokubakho.
I-2021 ibone utshintsho olukhulu kwiklabhu- abasetyhini ngoku banokujoyina njengamalungu kwaye bonwabele ukudlala okungathintelwanga. Kwiminyaka edlulileyo, abasetyhini babevunyelwa ukuba badlale njengeendwendwe emva kwemini ngeCawa. NgoSeptemba ubona iPine Valley ibamba iNdebe yeCrump yonyaka, ethiywe ngegama lomsunguli weklabhu. Umhla weNdebe yeCrump kuphela kwamalungu oluntu avunyelweyo kumabala eklabhu.
Kuphi enye indawo enyanzelekileyo ukuba ufike kwibala yegalufa usebenzisa i-limousine? IShadow Creek iyathanda ukwenza izinto ngokwahlukileyo kwaye le quirk yinxalenye yomtsalane wayo. Iindwendwe kufuneka zihlale kwihotele ye-MGM eLas Vegas ukuze zikwazi ukudlala kwibala yegalufa kwimizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 kude.
IShadow Creek yaqala njengeklabhu yabucala ngo-1989, kodwa yabhengezwa esidlangalaleni kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. UTom Fazio uyile ikhosi enemingxunya eli-18 kwi-oasis phakathi kwentlango, ejonge iintaba.
Le khosi yabamba iNdebe ye-PGA ye-CJ ye-CJ ngo-2020 kwaye yabamba noMdlalo: iTiger vs Phil (Tiger Woods vs. Phil Mickelson) ngo-2018.
Iklabhu yelizwe lase-Oakmont
Ungalindela iklasi kunye neembono ezintle kwenye yeeklasi zegalufa ezindala elizweni. Iklabhu yelizwe i-Oakmont yasekwa ngonyaka we-1903 kwaye igcine igama layo lokuba yenye yezona zifundo zinzima zijikeleze.
Imifuno ekhawulezayo kunye ne-175 yeebunkers ezinzulu (kubandakanya i-Church Pews eyaziwayo) yenza le khosi yasePennsylvania ibe ngumceli mngeni nakwigolfer enamava. Uya kuba nakho ukuya kuphela ukuba umenywe buqu ukuba uye kwiklabhu njengendwendwe okanye ngokwenene ube lilungu ngokwakho.
Iklabhu ikwanemitshato emininzi kunye neminyhadala yamaqela kumagumbi abo okusebenza. Bamba umsitho wakho kwi-Ballroom ephucukileyo, okanye ukhethe iThala lencwadi ngesiqhelo esithe cwaka nangakumbi.
IBandon Dunes Golf Resort
Kukho iikhosi ezintandathu ezahlukeneyo kwiBandon Dunes Golf Resort. Ungonwabela ukudlala ikhosi yekhonkco ngelixa ujonge uLwandlekazi lwePasifiki. I-Bandon Preserve yikhosi engama-13 engaphezulu komdlalo olungileyo. Yonke imali evela ekhosini iya kwi-Wild Rivers Coast Alliance, exhasa ulondolozo, uluntu kunye noqoqosho lwasekhaya.
Awuyi kulamba njengoko kukho iindawo zokutyela ezisixhenxe kunye nemivalo onokukhetha kuyo. Zama ukutya kwasePacific Northwest kwiPacific Grill, okanye ukutya kwesiko laseScotland eMcKee's Pub.
Yonwabela iklasi yegalufa kwintuthuzelo yegumbi lakho ngokukhetha igumbi e-The Inn. Apha, uya kuba nakho ukubona umbono ongenakuphazanyiswa kwekhosi ngaphandle kwefestile yakho. Ngaphandle koko, unokukhetha ukuhlala kwiLily Pond, apho unokufumana indawo yakho yangasese ejongene nehlathi. Kukho ukhetho oluninzi kunye neendawo zokuhlala ezithandathu onokukhetha kuzo.
IKlabhu yeGalufa yaseMuirfield
Ilali yaseMuirfield yayinegama elikhulu lokulandela njengoko igama layo likhaya lekhosi endala yegalufa. UJack Nicklaus wayefuna ukuhlonipha ikhosi eyaziwayo xa wayedala eyakhe ngo-1974.
I-Dublin, eOhio yindlela ende esuka eScotland, kodwa ikhosi ihlala inyanisile kwilifa layo. Ibekwe kwiihektare ezingama-220, amalungu kunye neendwendwe zawo angadlala kwikhosi eneengozi ezininzi zamanzi, i-bunkers kunye ne-fairways emxinwa.
UNicklaus uhlala ejonga ukuphuculwa kwikhosi ukuze iklabhu iqhubeke nokutshintsha kwetekhnoloji kunye nenkqubela phambili yoyilo. Ngo-2020 wabona ukuphinda kwakhiwe kwakhona kwikhosi kwaye imingxunya emininzi yaphuculwa.
Zine iindawo zokutyela kwiklabhu, kubandakanya negumbi losapho elinobubele iGolden Bear, elibonisa indawo yomlilo enamacala amabini.
Eyasungulwa ngo-2009, i-Country Club e-Muirfield Village Foundation nayo inceda abantwana abaneemfuno ezizodwa e-Ohio. Oko kwasekwa, isiseko sanikezela ngaphezulu kwe- $ 250,000 yezibonelelo kwizibonelelo ezahlukeneyo.